Koogeek Smart Light Strip, kuvheneka uye kushongedza kweKeKit | IPhone nhau
Isu tinoongorora imwe yeanonyanya kufarirwa zvishongedzo kubva kuKoogeek nekutenda kune akakura mikana yainopa. Iyi ndiyo Koogeek's Smart Light Strip LED Strip, chigadziro chemwenje chakasiyana pane echinyakare mabumba iyo inotipa, nekuda kwehunhu hwayo hwakakosha, mikana yakawanda sechiedza uye chekushongedza chinhu.
Inoenderana neKeKKit uye nekudaro inokwanisa kuverengerwa mune otomatiki, nharaunda uye nekudyidzana nezvimwe zvishongedzo zvinoenderana neApple demotic chikuva, iyi Smart Light Strip ndechimwe chezvinhu zvinoshamisira izvo zvatinogona kudzora neKeKKK, uye tinokuratidza maitiro uye mashandiro ainoita.
Iyo tambo yemwenje ye LED ine mamirioni gumi nematanhatu mavara, mazana mashanu emwenje uye 16W yekushandisa, iine hurefu hwakazara hwenzvimbo inovheneka yemamita maviri, kune iyo inofanirwa kuwedzerwa iyo 500cm yeiyo USB yekubatanidza tambo iko iko switch yekubatanidza. Iyo tambo inogona kutemwa pamwe nehurefu hwayo hwese kuburikidza nenzvimbo dzakatarwa, asi haigone kupetwa, saka uchafanirwa kufunga zvakanaka usati wafunga kubvisa chidimbu chayo nekuti kunenge kusisina kudzokera kumashure.
Nezve iyo funtionability tinoda kuti tibatanidze nechiteshi che USB, kungave kubva pakombuta, TV kana chajaja ye USB. Haasi materevhizheni ese ane madoko e USB anopa magetsi anodiwa kuti ashande zvakanaka, saka kana, sezvandiri kuratidza muvhidhiyo, iwe uchida kuishandisa se "Ambilight" paterevhizheni yako, unofanirwa kuziva kuti izvo zviteshi zvepa terevhizheni zvinogona hazvina kukwana. Uye harisi dambudziko rakakura, nekuti zviri nyore kutora mukono-wechikadzi USB yekuwedzera tambo uye woenda nayo kune imwe nzvimbo iripedyo.
Kutenda kune yekunamatira kumusana kwayo, unogona kuiisa chero kwaunoda: terevhizheni yako, pasi pemidziyo yekicheni, pane yako komputa tafura, pasherufu ... mikana yekushongedza yeiyi LED tambo yakasiyanasiyana. Ehezve, haina kukodzera kune vekunze.
Kana isu tisati tave nechimwe chekukanganisa kweKoogeek LED strip (hazviite kupatsanura zvikamu), ikozvino tinofanirwa kupindura pane chechipiri: hazviite kuve nemavara akasiyana muhure hwese. Iine mamirioni gumi nematanhatu emavara asi inogara ichivheneka mune rimwe ruvara. Kunyangwe zvakadaro, nekuda kwemutengo wayo uye nemikana yainopa, chishongedzo chakakurudzirwa kune avo vanoda kutanga muKeKKit uye vanoda kuzviita nechinhu chinonyatso kuoneka.
Tinodzora sei mwenje wako? Semazuva ese isu tine dzimwe nzira mbiri: iko kunogadzirwa nemugadziri (Koogeek Imba inowanikwa pa iyi link ku iTunes) kana iyo iOS Kumba app. Iyo yakagadzirirwa senge chero imwe mudziyo weKiKit uye inoshandiswa seyakajairwa girobhu mwenje icharapwa, ichikwanisa kudzora kusimba, ruvara uye tembiricha (unogona kuona zvakadzama maitiro mu ichi chinyorwa) pamwe nekukwanisa kuzviisa mune otomatiki, kuronga uye kudzima kana kugadzira nharaunda nemhando dzakasiyana dzinoenderana.
Koogeek's LED Smart Strip iri pachayo inokodzera chimwe chezvinhu zvinonyanya kutsvakwa-kubva kuKeKK-inoenderana accessories brand, uye ndeyekuti pamusoro pekushanda sechinhu chemwenje ine mikana inonakidza yekushongedza. Yakanyatso kusanganisirwa muImba app pamwe neyese HomeKit-inoenderana zvishongedzo Icho chigadzirwa chinonakidza kwazvo pamutengo wayo, nyore kushandisa uye, pamusoro pazvose, kuwana mhedzisiro inokatyamadza patinongoziva pekuisa. Mutengo wacho ndeye € 36,99 mukati Amazon, zvakati wandei.
Koogeek akatungamira Smart Chiedza Strip
Mamita maviri pakureba
16 mamirioni mavara
Kuisa kuri nyore uye kumisikidza
Ruvara rumwe chete panguva
Haikwanise kutsemura zvikamu
Hazvina kukodzera kunze
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Koogeek Smart Light Strip, kuvheneka uye kushongedza kweKeKKit
Ziso !! Mune rondedzero yeAmazon inoti inongowirirana ne2,4 GHz imba Wi-Fi.
Kunge 99,99% yemagetsi mwenje
Ini ndinofunga iyo Xiaomi lightstrip iri nani zvikuru. Inoenderana ne homekit, alxia, iyo vhezheni 2 yavakangoburitsa inokwenenzverwa ku10m uye ichave inoenderana neApple kumba. Inokodzera kunze. Hunhu hwakanaka kwazvo. Kuderera kushandiswa. Kubatanidzwa neyako ecosystem. Uye ndine chokwadi kuti ndakanganwa chimwe chinhu.
Pindura kuna Null